सुडान घोटालाका दोषी कैदी भारतीलाई प्रहरीकै स्कर्टिङमा होटल हिमालयमा मेजमानी. Break n Links: Media for all - Across the globe
कैदी बन्दीका पनि आफ्नै अधिकार हुन्छन् । उनीहरुलाई रोग लाग्यो भने राज्य संयन्त्रकै पहलमा उपचार गरिन्छ । यो नौलो कुरा नै होइन । तर, कैदी बन्दीलाई प्रहरीकै स्कर्टिङमा उपचारको बहानामा तारे होटलमा लगेर मेजमानी गराइन्छ भने के भन्ने ?
भारतीले प्रहरीसँगको मिलोमतोमा उपचार गराउने बहानामा काठमाडौंको तारे होटल पुगेर घण्टौ मोजमस्ती गरेको प्रमाण शिलापत्रले फेला पारेको छ ।
कारागारबाट बीर अस्पताल उपचारको लागि जानेभन्दै भारती ललितपुरस्थित तीन तारे होटल हिमालय पुगेको खुलेको हो । डिल्ली बजार सदरखोरबाट उपचार गराउन बीर अस्पताल लगिएका भारतीलाई पुल्चोकमा रहेको होटल हिमालय पुर्याउनै पर्ने ‘वाध्यता’ प्रहरीलाई किन पर्यो भन्ने रहस्य भने खुलेको छैन ।